‪#‎Yaadachiisa Rama‬daana Zakaa Fixrii salaata iidaatiin dura baafamti. Oromia Shall be Free |
bilisummaa July 3, 2016	Comments Off on ‪#‎Yaadachiisa Rama‬daana Zakaa Fixrii salaata iidaatiin dura baafamti.
iidaa booda kenne
sadaqaa qofa taate
hafti. Inni zakaatul
fixriin hin baafne. Zakaan fixriidhaa
dirqama. (By Dr Zakir
Naik Afaan Oromotiin)
Isiin midhaan suguda
tokkoot (k.g 2: 40) yoo
kiiloo lamaaf cinaa
gaariidha nama tokkorraa baasuu
Abdallaa ibnu umar
(r.a.) akki jedhe ” Nabiin
(s.a.w.) tokko tokkoo
muslimtootaa irratti zakkaa fixii tan
tahuu gabra tahuu,
dhiira tahuu dubartii tahuu, guddaa tahuu
xiqqaa tahuu, suguda
tokkorraa kafalama jedhe. ” Jecha bukhaarii
keessatti nabiin s.a.w.
zakaa fixrii dirqama
godhe …jedhee hadiisa
oofee achi keessatti..
osoo namni gara salaata iidaa hinbaane duratti
akka kennamtu ajaje”
(faaydaan) isiin dirqama
1-nama soomane dogoggoraa fii badii
ir’ina isaati guutti,
bakka jallate diriirsiti.
hiyyeeyyiiti taati, guyyaa iidaa kabajamaa
akkuma ummanni kuun gammachuun iida
quufee beela bahee
gammachuu iidaa akka
hirmaatu gargaarti. Yeroo zakaa fixrii.
Yeroon isiin baafamtu
abdallaa ibnu umar kan
ibsametti “nabiin s.a.w. osoo ummanni salaata
iidaatti hinbaane akka
kennamtu ajaje.” Jedhe.
Tanaaf irra caalaan
yeroo isii kana. Garuu
ammas guyyaa iidaa duratti guyyaa tokko
yookaa lama dursanii
yoo kenna numa taha.
Kanas abdallaa ibnu
guyyaa lama yookaa tokko iida dursanii fixrii
Akkasuma zakaa fixrii
salaata iidaa boodatti
Kanarrattis ibnu abbaas r.a. akki jedhe Nabii
s.a.w. zakkaa fixrii
kafaluu dirqama godhe
akka nama soomane
hiyyeessaaf gargaarsa taatuuf, namni salaata
iidaa dura kafale kennaa
ammo namni salaata
booda kenne sadaquma
sadaqaa irraa taate isaaf taati.(sadarkaa
zakaa fixrii sanirraa
Previous GOCHA TPLF BABALIDHINA AMANITAA FI RAAYYAA ITTISAA
Next IBSA WAAJJIRA HAYYU DUREE ABO SHANEE IRRAA KENNAME ILALCHIISE XINXAALA OBBO BORUU BARRAAQAATTIN DHIHAATE .